100% polyester ပစ္စည်းနှင့် nonwoven Technical အပ်ကော်ဇောလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် - တရုတ် Huizhou Jinhaocheng
ဂုဏ်ထူး / ဆုပေးပွဲ
ကုန်ပစ္စည်း application ကိုလယ်ပြင်
Nonwoven အထည်အလိပ် Filter
အပူ Bond Wadding- ရိုက်
Spunlace Nonwoven အထည်အလိပ်
မွေ့ရာ & ဂွမ်းစောင်ပြုလုပ်ခြင်း
HEPA filter ကို
မွေ့ရာကာကွယ် topper မှိုအထောက်အထားမွေ့ရာနှင့်အတူ ...
To-အမိန့်-Make တစ်ခါသုံးဆေးဘက် nonwoven မျက်နှာစရဖ ...
2018 တုတ်အိတ်မင်းသမီးဖက်ရှင် utility ကိုအိတ် wome ခံစားရတယ် ...
ဟိုတယ်စတိုင်ကော်ဇောထုံးစံလွင်ပြင် nonwoven polyes လုပ် ...
တရုတ်စျေးပေါ polypropylene အပ် hepa filter ကို cl ခံစားရတယ် ...
100% polyester ပစ္စည်းနှင့် nonwoven Technical အပ်ကော်ဇောလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်
100% polyester သို့မဟုတ် Customerized
ရေချိုးခန်း, အိပ်ခန်း, မော်တော်ကား, ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်, အလှဆင်, ပင်မစာမျက်နှာ, ဟိုတယ်, အဆောက်အဦးအပြင်, ဆုတောင်းချက်, အိမ်သာ
3.2m အတွင်း, 60 ''
မဆို color ကို
60 ~ 1000gsm သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
ISO9001 / နျ Standard RoHS / Oeko-Tex နျ Standard 100 ဦး
မီတာ 100 / လိပ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
OEM ဒီဇိုင်း availabe ဖြစ်ပါသည်
နေ့နှုန်း 12000 ကီလိုဂရမ် / ကီလိုဂရမ်
30% သိုက်၏လက်ခံရရှိမှုအပျေါမှာ 14-30 ရက်အတွင်း
100% polyester ပစ္စည်းနှင့် nonwoven Technical အပ်ကော်ဇောလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်။
100% polyester သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်။
ဆေးထိုးအပ် nonwoven လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်။
60 ~ 1000gsm သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်။
အားလုံးအရောင်များ (သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်) ရရှိနိုင်ပါသည်။
မီတာ 100 / လိပ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်။
ပြင်ပမှာပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးခြင်း, စာလိပ်၌ scroll ။
T / T, L ကို A / C
30% သိုက်၏လက်ခံရရှိမှုအပျေါမှာ 14-30 ရက်။
20ft ကွန်တိန်နာနှုန်း5~6တန်ချိန်;
40HQ ကွန်တိန်နာနှုန်း 12 ~ 14 တန်ချိန်။
non ယက်အထည်အလိပ် အသုံးပြုမှု:
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်လျှပ်စစ်စောင်, အိပ်ယာ, မော်တော်ကားအတွင်းပိုင်း, အိတ်, မျက်နှာဖုံး, ဦးထုပ်, အဝတ်, shoecover, ခါးစညျးရှေ့ဖုံး, အထည်, ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ, ပရိဘောဂ, မွေ့ယာ, ကစားစရာအဖြစ်ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းစကားလုံး၏အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှလယ်ပြင်၌အသုံးပြုကြသည် အဝတ်အစား, filter ကိုထည်, ပစ္စည်းများဖြည့်စွက်, စိုက်ပျိုးရေး, အိမ်မှာအထည်အလိပ်, အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း, စက်မှုလုပ်ငန်း, interlining နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ။
*** Nonwoven လျှောက်လွှာ ***
1. Eco အိတ်: စျေးဝယ်အိတ်, ဝတ်စုံကိုအိတ်, ပရိုမိုးရှင်းအိတ်, ဆုကြေးဇူးကိုအိတ်, တုတ်အိတ်, etc
2. မူလစာမျက်နှာ•အထည်အလိပ်: စားပွဲတင်အထည်, တစ်ခါသုံးအထည်, ပရိဘောဂကူရှင်ချုပ်, ခေါင်းအုံး & ဆိုဖာအဖုံး, နွေဦးအိတ်ကပ်, မွေ့ရာနှင့်စောင်, ဖုန်မှုန့်အဖုံး သိုလှောင်မှု box ကိုဗီရို, တဦးတည်းအချိန်ဟိုတယ်ဖိနပ်, ဆုကြေးဇူးကိုထုပ်ပိုး, မြို့ရိုးကိုစက္ကူ, etc
3.Interlining: ဖိနပ်, အဝတ်သေတ္တာ, etc
4. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ / ခွဲစိတ်: ခွဲစိတ်ကုသအထည်, စစ်ဆင်ရေးဂါဝန်နှင့်ဦးထုပ်, မျက်နှာဖုံး, ဖိနပ်အဖုံး , etc ။
5. စိုက်ပျိုးရေး: စိုက်ပျိုးရေး, စက်ရုံအိတ်, အသီးနွေးအဖုံးမစောင့်, သီးနှံအတွက်အသုံးပြုခရမ်းလွန်ကုသထုတ်ကုန်
အဖုံး / mulch, စိုက်ပျိုးရေးအင်တိဖရိစ်ဓါတ်ရွက်ဖျင်တဲ, etc ။
6. မော်တော်ကား / အော်တိုအဖုံးများနှင့်ကူရှင်ချုပ်
**** အပ်ခံစားခဲ့ရ ****
အခြေခံအားဖြင့်ငါးနည်းပညာများ nonwovens ဖွဲ့စည်းရန်လျှောက်ထားနေကြပါတယ်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ဆေးထိုးအပ် nonwovens လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် - လည်းအပ်ခံစားခဲ့ရကိုခေါ် - ဆဲထည်သို့အမျှင်ပြောင်းလဲဘို့အရေးအပါဆုံးနည်းပညာဖြစ်ကြသည်။ ဆေးထိုးအပ်လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် nonwovens များ၏ခန့်မှန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝေစု 30 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးထိုးအပ်လာကြတယ် nonwovens ဖွဲ့စည်း၏အလွန်ရိုးရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အရည်အသွေးနှင့်ထုတ်ကုန်မတူကွဲပြားမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည်။ တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ကို အသုံးပြု. ဘွန်းရေမရှိသောလိုအပ်ပြီးနည်းနည်းစွမ်းအင်စားသုံး။ ဒါဟာတစ်လောကလုံး applications များ, အလိုအလျောက်၏မြင့်မားသောဘွဲ့နှင့်အနိမ့်ထမ်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူမြင့်မားထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုရှိပါတယ်။
PDF ဖိုင်အဖြစ် Download
နောက်တစ်ခု: ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးရေမြှုပ်လမိုင်းဘရာစီယာခွက်ကို padding ကိုပစ္စည်း
Nonwoven အပ်လာကြတယ်ရိုးရိုးပြပွဲ ကော်ဇော
PP ကော်ဇော Rolls သည် ဟိုတယ်အခန်းများ
ဆေးထိုးအပ်လွင်ပြင် nonwoven polyester ကော်ဇောလက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် ...
ဆေးထိုးအပ် polyester လွင်ပြင်ပြပွဲ outdo လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် ...
Nonwoven polyester လွင်ပြင် 3d ကြမ်းပြင်ကော်ဇော
အရည်အသွေးမြင့်မားအပ် Anti-စလစ် polyester လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက် ...
အရောင်ဆေးထိုးအပ်မျှ polyester လက်သီးဖြင့်ထိုးနှက်-to-အလို့ငှာ Make ...
polyester လွင်ပြင်ပြင်ပအားကစားရုံဖျာကာကွယ်ငါးကြင်း ...